घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति ? – ramechhapkhabar.com
घट्यो सुनको मुल्य, तोलाको कति ?
नेपाली बजारमा शुक्रबार सुनको मुल्यले २०० रुपैंयाले घटेको छ ।
हिजो प्रतितोला ९३ हजार १०० रुपैंयामा कारोबार भएको सुनको मुल्य शुक्रबार २०० रुपैंयाले ओरालो लागेर प्रतितोला ९२ हजार ९०० रुपैंयामा कारोबार हुने महासंघले जनाएको छ । तेजावी सुनको मुल्य भने आज ९२ हजार ४०० रुपैंया कायम भएको छ ।
यस्तै चाँदीको मुल्य पनि तोलामा १५ रुपैयाले गिरावट आएर प्रतितोला १२ सय ६० रुपैंया कायम भएको महासंघले जनाएको छ ।
काठमाडौँ / नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी चार महिनामा ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बिहिबार चालु आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिक अवधिमा निष्काशन गरिने आन्तरिक ऋण निष्काशन तालिका सार्वजनिक गर्दै सो जानकारी दिएको हो ।
बैंकद्वारा जारी सूचनाअनुसार राष्ट्र बैंकले बोलकबोलबाट निर्धारण हुने गरी यही माघ १३, २० र २७ गते गरी कूल १३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल निष्काशन तथा बिक्री गर्नेछ ।
त्यस्तै, बैंकले बोलकबोलबाट निर्धारण हुने यही माघ २१, १४ गते र फागुन १२ र १९ गते ४० अर्ब रुपैयाँ बराबरको बिकास ऋणपत्र निष्काशन गर्ने तालिकामा उल्लेख छ भने दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको नागरिक बचतपत्र र ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बैदेशिक रोजगार बचतपत्र बिक्री गर्नेछ ।
चालु आर्थिक बर्षभित्रमा दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको राष्ट्र बैंकले पहिलो चौमासमा ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाई सकेको छ । बैंकले ट्रेजरी बिल तथा विकास ऋणपत्रमार्फत सो ऋण उठाएको हो ।
दोस्रो चौमासमा ५६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाएपछि राष्ट्र बैंकले चालु आवको तेस्रो चौमासमा पनि एक खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने जानकारी दिएको छ ।